Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) (ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) (ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း)
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) (ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း) ကဘာလဲ။
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းဆိုသည်မှာအမျိုးသားတွေမှာ ဆီးကျိတ်ဂလင်းကြီးလာတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ဂလင်းဆိုတာ အမျိုးသားမျိုးပွားစနစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သစ်ကြားသီး အရွယ်အစားရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေ သန္ဓေအောင်ဖို့ အတွက် အရေးပါတဲ့အရည်တစ်မျိုးကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကြီးထွားမှုကာလကို နှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီး ပထမပိုင်းက လုူပျိုဖော်ဝင်စမှာ စပြီး ဒုတိယပိုင်းကတော့ အသက်၂၅၀န်းကျင်မှုာ စပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းကို များသောအားဖြင့်ဒုတိယပိုင်းကာလမှ တွေ့ရပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ဂလင်းဟာ ဆီးစွန့်ပြွန်အထက်ပိုင်း ပတ်ပတ်လည်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ဂလင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာ ဆီးစွန့်ပြွန်ကိုသွားဖိမိပြီး ဆိးမစွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆီးအိမ်တင်းလာ နိုင်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာ ဆီးအိမ်နံရံတွေလျော့ရဲလာပြီး အာရုံကြောတွေက ဆီးအိမ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းစတဲ့ ဆီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေမှာသာဖြစ်တဲ့ တွေ့ရများတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၅၀ကျော်တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ အသက်ကြီးလာတဲ့အမျှ ဖြစ်နိုင်ချေများလာပါတယ်။ အသက်၅၁ နဲ့ ၆၀ ကြားအမျိုးသား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ အသက်၈၀ ကျော် အမျိုးသား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆီးကျိတ်ကြီးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေပါတယ်။
ဆီးစွန့်ပြီးချိန်နောက် တစ်ခါ ထပ်စွန့်လိုခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင်နာခြင်း
ဆီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေ ရက်သတ္တပတ်ကြာ(သို့) လနဲ့ချီ ခံစားရခြင်း
အမျိုးသားတွေမှာ အသက်ကြီးလာတဲ့အမျှ ဖြစ်နိုင်ချေများလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ ပော်မုန်းမညီမျှမှုတွေ ဆဲလ်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် ၆၀ အောက်အမျိုးသားတွေမှာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး ခွဲစိတ်ဖို့ လိုလောက်တဲ့အထိပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်(အသက်၄၀အောက် အမျိုးသားတွေမှာ ဆီးကျိတ်ဂလင်းကြီးခြင်း လက္ခဏာတွေ တွေ့ရခဲပါတယ်။ အသက်၆၀ အမျိုးသားသုံးပုံတစ်ပုံ နဲ့ အသက်၈၀ အမျိုးသားတစ်ဝက်မှာ လက္ခဏာမပြင်းထန်ရာကနေ ဆိုးဆိုးရွားရွားပြသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူမျိုး (လူဖြူတွေနဲ့လူမည်းတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ် လူမည်းတွေဟာ လူ့ဖြူတွေထက် အသက်ငယ်ငယ်မှာလည်း လက္ခဏာပြနိုင်ပါတယ်။)
သင့်ရဲ့လက္ခဏာတွေ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှူတွေမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေကတော့
စအိုကနေ အယ်လ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း (tranducerဆိုတဲ့ ကိရိယာကတစ်ဆင့် လုူရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တစ်ရှူးတွေဆီကိုဖြတ်ခိုင်း ပြီး ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ဂလင်း မူမမှန်ခြင်းပြဿနာများကို သိနိုင်ပါတယ်။)
သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) (ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
5-alpha reductase inhibitors(ဆီးကျိတ်ဂလင်း ကြီးလာတဲ့အခါမှာ စုပုံလာနိုင်တဲ့ DHT ထုတ်လုပ်မှုကို တားပေးတဲ့ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ finasteride (Proscar) ၊ dutasteride (Avodart) ဆေးများပါဝင်ပါတယ်။
ပေါင်းစပ်ဆေးပေးခြင်း(ဆေးတစ်မျိုးထဲ ပေးတာထက်ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။ finasteride နဲ့ doxazosin၊ dutasteride နဲ့ tamsulosin ၊ alpha-blockers နဲ့ antimuscurinic ။
• ဆီးနှစ်ခါသွားခြင်း။ ဆီးသွားနိုင်သလောက်သွားပြီးရင် ခဏနားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက် ဆီးထပ်သွားကြည့်ပါ။
• ဆီးမသွားအောင် အရည်တွေ မသောက်ဘဲနေခြင်းကို ရှောင်ခြင်း (ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကနေတစ်ဆင့် အခြားသောပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်း အရည်တွေသောက်ခြင်းက ကောင်းပါတယ်။)
• ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေကိုတားတဲ့ဆေး၊ ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေး၊ အစာအိမ်ဆေးတွေစတဲ့ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဆေးတွေက ဆီးသွားခြင်းကိုခက်ခဲစေနိုင်တဲ့အတွက် ရှောင်ရှားခြင်း (ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ နဲ့တိုင်ပင်၍ သောက်ခြင်း)
Prostate Enlargement/BPH Health Center.
http://www.webmd.com/men/prostate-enlargement-bph/benign-prostatic-hyperplasia-bph-topic-overview. AccessedJul 15 2016
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/basics/risk-factors/con-20030812. Accessed Jul 15 2016
http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/urologic-disease/benign-prostatic-hyperplasia-bph/Pages/facts.aspx. Accessed Jul 15